Sabboontota Oromoo ukkaamsuun itti fufe; Qeerroon kunneen Kaleessa Finfinnee keessaa hidhaman. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSabboontota Oromoo ukkaamsuun itti fufe; Qeerroon kunneen Kaleessa Finfinnee keessaa hidhaman.
“Namaa sadii immoo maqaa isaani hin beeku; saboototni kun kaleessaa ff irraa butamaani ukkafaman.”
Qaamni dirqama fudhatee biyay bulchu haga barattoota kanaa gahuu hanqate.
Barattoota ogummaa Fayyaa Yunivarsitii Amboo garuu sodaan lubbuu lammii isaanii irraa isaan hin hambifne. Bakka mootummaan weerartuu saba keenya duguugaa jiru, Oromiyaa kibbaa, Yaaballootti argamnii gargaarsa ogummaa kennaa jiru.
Isin, dhaloonni qubee ummata keenya biratti argamtanii waan jajjabeessitaniif galataa guddaa argadha!
OMN rakkoo qotee bultoota Oromoo naannoo Finfinnee jiran ilaalchisee documentary kan dhiheessaa juru ODP irrattis ta’ee murna siyaasaa Oromoo biroorratti duuluuf ykn ammoo ABOs ta’ee murnoota siyaasaa kamuu jeequmsaaf onnachiisuuf osoo hin taane rakkoolee qabatamoo qonnaan bultoonni kunniin amma keessa jiraniif kan bara dheeraaf keessa turan ummannis ta’ee mootummaan haaromsa adeemsisaa jiru kun akka beekuufii xiyyeeffannoo barbaachisoo ta’e kenneefii falas akka itti barbaadufi dha. Falli akkasii kun ammoo kan argamuu danda’u haala nagayaaf tasgabbiin jiru keessatti malee waraanaan walitti duuluudhaan ta’uu hin danda’u. Kanaafuu warrii dhimma kana hiikkoo isaa ala (out of context) fudhattanii dibbee duulaa waraanaa walitti dibbiftan irraa dhaabadhaa. Ummata propagandaan burjijjeessitanii nagaya hin dhoowwinaa maaloo.
“girmish koo yoyyaa akkami nagaa dubbii arifachisaa dhaa beeki torbee kana oromoo addaan qooqooduu irraati akka hojatamaa jiru beekamaadha keessattuu akkataan naannawa harargee kanati mulachaa jiru guddoo na sodachisaa jira mootummaan tuni ABO dhabamsisuudhaaf deemti waan jedhuun olala jabaatu deemaa jira kanaaf dhufanii hanga nufixan teenne hin eegnu iddoo hundaa hidhanee tarkaafii yaa jalqabnuu waan jedhuutu jira wal waraansaaf qophawuu maaltu fide yoo jetteen erga ODP angoo qabatee as oromoo lafa irraa balleessuun gar malee hammatee jira akka ragaatii sababni isaan dhiyeessan dokumentary OMN qotee bulaa naanna finfinnee irratti yakka rawwatamaa ture agarsiisu sun akka ragaatti dhiyeefachaa jiran kessattu carraa kanatti fayyadamuun jawar mahmmed fa.anuu mootummaan tuni akka nurraa buutu irratti hojechaa jira erga inninuu nuuf hayyame nuti maal eegna jedhanii shakkii keessa nu galchaa jiranii please yeroof dokumentary suni otuu dhaabattee gaarii natti fakkaata ummata akka malee arsaa jira waan taheef brother”
Oromia: Haga ammaatti kan jiru Raayyaan Wayyaaneen ijaarratte malee Raayyaa Ittisa biyyaa miti. Kanaaf, Raayyaa Weerartuu Wayyaanee-RWW jennee waamuu qabna.